Mesa 20.0.0 inouya nerutsigiro rweVulkan 1.2, yakawedzera rutsigiro uye zvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Chiziviso chekuvhurwa kweshanduro nyowani ye kuitwa kwemahara kweOpenGL neVulkan, "Tafura 20.0.0". Kuve iyi vhezheni yekutanga vhezheni yebazi idzva 20.xx uye kuti iri zvakare inofungidzirwa munzvimbo yekuyedza Kubva ipapo iyo yekupedzisira yakagadzika vhezheni yekodhi ichaburitswa, iyo ichaburitswa mu "Tafura 20.0.1".
Kune avo vasingazive vatungamiriri veMesa, iwe unofanirwa kuziva kuti aya akavhurika sosi yeLinux software inowanikwa ye AMD, NVIDIA uye Intel Hardware. Iyo Mesa chirongwa chakatanga seyakavhurika sosi yekumisikidza yeiyo OpenGL kududzirwa (sisitimu yekupa inowirirana 3D mifananidzo).
Kwemakore, chirongwa ichi chakakura kuita mamwe maAPI, inosanganisira OpenGL ES (shanduro 1, 2, 3), OpenCL, OpenMAX, VDPAU, VA API, XvMC, uye Vulkan. A akasiyana ma controllers zvezvishandiso inobvumira Mesa maraibhurari kuti ishandiswe munzvimbo zhinji dzakasiyana, kubva kune software yekuteedzera kupedzisa Hardware kumhanyisa kwemaGPU emazuva ano.
1 Chii chitsva muMesa 20.0.0?
Chii chitsva muMesa 20.0.0?
Mune ino vhezheni nyowani yeMesa 20.0 vatongi.0 yakazara OpenGL 4.6 rutsigiro rwunopihwa yeIntel i965 uye AMD radeonsi GPUs, OpenGL 4.5 tsigiro ye AMD (r600) uye NVIDIA (nvc0) GPUs, pamwe neVulkan 1.2 rutsigiro rweIntel uye AMD makadhi.
Iwo maRADV neAVV madhiraivha ye AMD GPUs uye Intel inotsigira iyo Vulkan 1.2 mifananidzo API, nepo RADV uye ACO ichipa muunganidzwa wema geometric shaders. MuRADV uye ACO yeGPU GFX10 (Navi) inotsigira Wave32 modhi.
For the Intel GPUs yakavakirwa pa Broadwell uye Skylake microarchitecture (Gen8+), mutyairi mutsva weIris anoshandiswa nekutadza, iyo yasvika parity pamwe neiyo i965 controller mune yayo kugona.
Iyo Iris controller inovakirwa pane iyo Gallium3D dhizaini, iyo inounza ndangariro manejimendi mabasa kune mutyairi weDRI muLinux kernel uye inopa kunze-kwe-kwebhokisi hutano tracker nerutsigiro rwekuburitsa chinhu cache kushandiswa zvakare. PZvezvipisi zvinoenderana neyakavakirwa michina diki, kusvika uye kusanganisira Haswell, mutungamiriri weI965 asara.
RADV (Vulkan mutyairi we AMD machipisi) uye yekumashure-kumagumo ekunyora "ACO" shaders, yakagadzirwa neValve senge imwe nzira kune iyo LLVM shader compiler, yakawedzera rutsigiro rweGCN 1.0 / GFX6 (Southern Islands) uye GCN 1.1 mazera eGPUs / GFX7.
LLVMpipe uye RadeonSI madhiraivha akashandurwa kuti ashandise epakati kupa hapana mhando (IR) yeNIR shaders, inoitirwa kushanda pazasi yakadzika, pasi peGLSL IR uye yemukati IR tafura. Yakagadziriswa NIR kuita.
Rarama-cache rutsigiro rwakawedzerwa kune mutyairi weRadeonSI, iyo inovimbisa kuwanikwa kwekudzokororwa kwakarongedzwa hatch zvinhu.
OpenGL uye Vulkan madhiraivha eIntel GPUs akawedzera rutsigiro rweGen11 (Jasper Lake) machipisi.
Mutyairi weV3D (weRaspberry Pi) akawedzera rutsigiro rwejometri shader inoenderana neOpenGL ES 3.2, uye rutsigiro ruzere rwakapihwa OpenGL ES 3.1.
Tulip Vulkan driver performance optimization yeQualcomm Adreno GPUs.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Mesa 20.0.0 inosvika nerutsigiro rweVulkan 1.2, yakawedzera rutsigiro uye nezvimwe
Miswe 4.3 inosvika kugadzirisa mamwe madhiragi uye nekupa zvinyorwa zvezvinhu zvayo